Ugbo ọka na uru. Nduzi anyị na-enyere aka na mkpebi ịzụta
Malite ubi Ngwaọrụ ubi & ogige ngwaọrụ oke mma ịkwa osisi
oke mma ịkwa osisi
Mgbe oge opupu ihe ubi na ọkọchị ihe niile dị n'ubi ahụ na-eto akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na osisi na osisi, oge awa nke ịkwa osisi ahụ abịa. Na ya, ogwu siri ike, alaka na alaka nke ogige dị iche iche yana osisi na osisi ohia nwere ike itinye aka. Ogige omeego na-enweghi ihe ọ bụla a ghọtara na mbụ. N'ihi na ngwa ngwa di ike enweghi ike iweghari aka, kamakwa ya na ihe di iche iche. E nwere ụdị mmanụ ụgbọ ala ugbu a, kamakwa na batrị. Echefula, onye ọrụ kwesịrị ịbụ ngwá ọrụ dị nkọ nke nwere ịkwa osisi, ma ọ bụ aka ya ma ọ bụ ụgbọala. A na-enye nlekọta kachasị ukwuu ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpụ ahịhịa, osisi na ogige na ọbụghị akụkụ aka gị. Ebe ọ bụ na ụdị, nha na ụgbọala nke oke hedge trimmer ga-emeghata na mmegide, ụdị dịgasị iche iche nke oke mkpuru ewu ga-adị mkpirikpi n'okpuru:
1 Ogidi batrị trimmer
3 Ogwe ọkụ eletrik eletrik
4 Ngwá ọrụ engine dị ka omema
5 Aka na-akwacha
6 Ugbo ọka na fangsack
7 Ogo osisi ogologo na telescopic
Ogidi batrị trimmer
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ogige trimmer na moto,oke mma ịkwa osisi ihe dị iche. Ngwaọrụ a na-arụ ma ọ bụ volta 18 Volt ma ọ bụ 36 Volt, dabere na ike achọrọ. Na 36 Volt, mkpuchi mkpuchi na-enwekarị nko ngwa ngwa nke nwere ike iji ụgwọ zuru ezu n'ime 30 gaa na 45 nkeji. Na batrị dị otú ahụ, enwere ike ịkwanye ịkwa mkpuchi maka ihe dịka 50 nkeji. Enwere ọbụna maka ọnụ ahịa dị elu karị, ọbụna ịkwa osisi batrị, nke nwere ike ịkwọ obere obere agụba. Mana n'ozuzu, arịa ndị dị n'ubi dị mma maka ọrụ obere na nke na-enweghị mgbagwoju anya. Ndị a na-agụnye ịmebi ogige ndị na-emeghị ihe ọ bụla na nhazi nke obere osisi dị n'ihu ubi.
Batrị ahụ e wuru na-eme ka onye ọrụ ahụ dị nnọọ mkpụmkpụ, na-enweghị ntanye na eriri na ntọala. Na mgbakwunye, ịdị arọ dị atọ na anọ kilogram kwa otu, nke ọma n'okpuru ịdị arọ nke ọkụ eletriki ma ọ bụ petrol powered hed trimmer. Ọnụahịa ahụ dịkwa ọnụ ala karịa karịa ụdị ndị ọzọ. Enweghi ike bụ na arụmọrụ ahụ adịghị elu. Maka ịrụ ọrụ dị elu, a gaghị eji eriri batrị rụọ ọrụ. N'ihe banyere mkpuchi batrị batrị, a na-agbanwekarị batrị, ma ọ bụ na-edochi batrị, nke a pụrụ ịzụta na ahia ahụ. Ụfọdụ ngwaọrụ na-arụ ọrụ na batrị abụọ. Otú ọ dị, n'agbanyeghị mgbanwe ndị a, enweghi ike imezu arụmọrụ nke ogwe ọkụ eletrik na-eji ọkụ batrị. N'elu oghere batrị ka ị kwesịrị ịlaghachi azụ, ma ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị eche atụmatụ atụmatụ ibibi úgwù, nke ekwesịghị ịbụ oké mkpọtụ.
Igwe Ngwunye Batrị Makita (52 cm, 18 V, na-enweghị batrị, ...
Oghere na-enweghị ntụpọ Bosch AHS 54-20 LI (na-agbanye ...
Nwa + Decker batrị trimmer (ya na ...
Okwute batrị dị ọ bụghị naanị maka oghere, kamakwa maka osisi. Nkea bu ihe eji eme ka ndi ogba oku na-eduzi ya ma jiri mma agha di nkpa. Voltage nke shrub shears bụ obere na nke kachasị nke 12 Volt, karịa na ogwe batrị trimmer. Ọtụtụ ụdị nwere batrị lithium-ion. Nke a dị mfe ibu, yana otu na ọkara ka awa abụọ nke oge ịgba ọsọ dị ike. A na-emegharị osisi shrub ahụ maka ihe ndị dị mkpa nke osisi na ahịhịa. Tupu ị na-eji ya, ị ga-atụle ụdị ahihia na osisi a ga-agwọta.
Ogwe ọkụ eletrik eletrik
Onye obula choro iwepu ohia ya n'ubi ya, kwesiri ka obia buru ndi ozo. Ngwaọrụ a na-arụ ọrụ na eriri. Nke a pụtara na a na-egbochi imegharị ahụ, ma a ga-eme ka arụmọrụ dị elu karị. E nwekwara ngwa dị iche iche maka ogwe ọkụ eletrik, dịka ihe atụ telescopic maọbụ fang. USB nke ụdị ugbu a nke ogwe ọkụ eletrik na-abụkarị ọtụtụ mita n'ogologo, ya mere a ga-ekpuchi anya n'ebe dị anya. A na-adọrọ ịdọ aka ná ntị dị oke mkpa, ebe ọ bụ na ọ bụghị mgbe niile ka ekwenyeghi na eriri adịghị na mpaghara ebe ị ga-egbutu ya ma jiri ya kpoo ya. Onye ọ bụla nke ga - arụ ọrụ na ịkwa osisi ya n'elu ma ọ bụ na ladder ga - achọpụta adịghị ike nke eriri eletrik. Maka mkpuchi ọkụ eletrik kwesịrị ikpebi onye nwere ike karia ogwe ọkụ batrị, mana ọ chọghị ịmepụta ụda dị ka mmanụ ụgbọ elu trimmer. Ndị na-emepụta ọkụ eletrik dị ezigbo mma. Epeepe eletriki nwere eletrik dị ogologo karịa okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ ọkụ ma na-adị mfe karị ma dị mfe iji aka karịa mmanụ eletrik.
Ngwá ọrụ engine dị ka omema
Ulo ukwu na nke kachasi ike nke ugbo ocha bu ndi na-ebughari site na engines na peturuolu. Akwa osisi ndị a nwere ike inwe nnukwu nnukwu osisi na-ahụkwa alaka osisi. N'ihi na ọ na-ebugharị ya nwere nnukwu ibu ma ọ bụ ya mere ndị ọkachamara ga-eji mee ihe. Ngwongwo nke engine engine trimmer na-arụpụta nnukwu ụzụ ọkụ na mkpu ụda, nke mere na a ghaghị iji ndị na-echebe ụda. Ọnụahịa nke ịkwa osisi mgbochi dịkwa oke elu karịa ụdị ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọghị ngwá ọrụ a mgbe mgbe, ịkwesighi ịzụta ya ma gbazite ya. Ihe ịrụ ụka kachasị mma nke ndị na-agba mmanụ eletrik na-ekpuchi. A na-ejikarị ígwè ọrụ abụọ na-ebugharị ha. Ọ bụrụ na ogwe ọkụ eletrik nwere ike ịmịnye ọkpụkpụ osisi ahụ ma kọwaa ha mgbe e mesịrị, a gaghị atụ anya nke a na ogwe mmanụ ụgbọ elu trimmer. Mkpụrụ ahụ na ihe ndị siri ike sawblades na-emekwa ka alaka ndị na-agba agba dị mfe. Ngwaọrụ a ezughị ezu maka ndekọ. A ghaghị iji ígwè a hụrụ maka nke a. Uzo ozo nke oke ogugu moto bu ihe ndi ozo. Cable enweghị ike imechi ụzọ. Ebe dị anya abụghị nsogbu. Ma engine na gasoline nwere ike ugbua na-atụ aro ụfọdụ. Ya mere enwere ike iji ya mee ihe ma oburu na enwere ike itinye akuku aru. N'ihi njedebe ndị a, a na-ejikarị ịkwa osisi hedgehog mee ihe maka nzube azụmahịa. Onye ọ bụla nke kpebiri ịzụta ụlọ ọrụ engine trimmer kwesịrị ịma ọkwa dị elu nke ịzụta na ndozi.
N'ezie, enwerekwa ịkwa ịkwa aka, n'enweghị ụgbọala. Ndị a dị ka ezigbo ịkwa osisi na ha dị na ogologo oge dị iche iche nke ọkpụkpụ shear na ndị dị iche iche. A na-ejikarị ịkwọ osisi ndị a egwupu ebe ndị buru ibu nke e jirila na-egbutu ya. Maka alaka dị nro, obere nkuku na ọnụ ya ka ịkwa osisi a ka dị mma. Ogwe aka ome trimmer bụ ọrụ maka ụzọ aghụghọ dị n'ogige ọhịa ma nweekwa uru iji ya ma ọ bụrụhaala na mmadụ nwere mmasị na ya. A na-enwekwa ịkwanye aka na telescopic mmanya. Otú ọ dị, a na-enyekarị ụdị ndị a dịka ndị na-akpọ alaka ụlọ ọrụ. Site na ụgbụ, a pụkwara ịbịkọta ọnụ ọnụ ndị na-amịkọta ọnụ maka ogologo oge ma si otú a na-akwagharị alaka.
Ugbo ọka na fangsack
Mgbe ị na-eji ịkwa osisi, ọtụtụ akwụkwọ, yana osisi, alaka na alaka alaka ndị daa n'ala, nke a ghaghị ịbịakọta ọzọ. Nke a nwere ike na-agwụ ike. Ọ bụ ya mere o ji dị mma ile anya ịkwa osisi, nke a na-enye ya na-akpọ "fangsack". A na-eme ka fang ahụ gbanwee ka ọ bụrụ ihe dị iche iche nke ụdị ngwaọrụ ya ma na-adịkarị obere ma ọ bụ dị ọnụ ala. Ụdị nhazi dị ka nkata nchịkọta kacha mma. N'ihi ya, a na-achịkọta maọbụ nnukwu ihe fọdụrụ. A pụkwara ịkụzi nkata ahụ n'ụzọ dị mfe. N'ikpeazụ, a pụrụ ikwu na n'ọnọdụ ikpebi na-akụda, catchbag fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nile na-egbochi njide ma na-ahụ n'ụzọ ọrụ nke isi na ụzọ. A na-enye ọtụtụ ụdị ịkwa osisi na-enweghị ihe mgbochi, nke a pụrụ ịzụta dịka ngwa. Mgbe ịzụrụ, a ghaghị ilekọta iji jide n'aka na ogige trimmer nwere ngwaọrụ ndị dị mkpa iji jikọta akpa ahụ.
Ogo osisi ogologo na telescopic
Na mgbakwunye na mkpuchi ogige dị mkpụmkpụ, e nwekwara ogologo oge ụdị nke onye na-eme ka ihe dịgasị iche iche nke ọkpụkpụ ahụ. A na-egbutu ogige ndị kasị dị ogologo na nke kachasị mgbagwoju anya na ogologo aka na ogwe aka ogologo. Otú ọ dị, ọ gaghị echefu na ogologo oge ọ bụ, ọ na-esikwu ike ọ bụ iji rụọ ọrụ ọnụ. Karịsịa kwesịrị ekwesị ebe a bụ ogwe ọkụ eletrik na-egbuke egbuke, ebe ọ bụ na ha nwere ma arụmọrụ maka ogologo osisi a na-ahụ anya na ịdị arọ dị ala, dị ka nsị ígwè na-ebu osisi. Otú ọ dị, ụfọdụ ebe n'ogige anaghị esi ike maka nnukwu ogwe ogologo a, nke mere na a ghaghị iji ihe a na-akpọ telescopic mmanya. A na-akpọkwa onye na-emepụta mkpụmkpụ osisi dịka ogwe ihe ndọtị dị ka ogwe osisi dị ogologo trimmer na, dị ka ụkpụrụ ya, ogige nkịtị trimmer nwere mgbatị kwekọrọ.
A na-eji ịkwa osisi batrị na tebụl eletrik ndị a, dị ka nke a na-ejikwa mmanụ ụgbọala. Eleghi anya ihe kachasị mkpa mgbe ịzụrụ oke ego dị otú a bụ ókè nsogbu hedges ma ọ bụ osisi dị. Dịka ọmụmaatụ, mkpanaka telescopic nwere ogologo, dịka ọmụmaatụ, mita ise na-eme ka uche bụrụ naanị ma ọ bụrụ na osisi ndị dị elu nke ịdị elu a ka a ga-ehicha ubi. Ọ bụrụ na hedges na osisi dị nanị mita atọ n'ịdị elu, mgbatị ahụ dị oke. Ọ bụrụ na ị na-agbanye ịkwa osisi na telescopic, ị ga-enweta ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị na ogologo mmanya. Nke a nwere ike ịgbatị ma ọ bụ n'ụdị telescopic. Ogologo ya dịgasị iche n'ọtụtụ ọnọdụ n'etiti mita abụọ na ise. A na-etinye ogige trimmer ahụ n'elu ọnụ ụlọ mmanya ahụ. N'ihe banyere engine, a na-etinye ya n'ọtụtụ ihe n'okpuru mkpanaka mkpara. N'ihi ya, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-agbalị ịkwagharị ebe nchekwa nke ngwaọrụ ahụ ruo ókè o kwere mee. Otú ọ dị, ụfọdụ mkpanaka télescopic nwere ike ime ka a gbanye moto ahụ n'elu mkpanaka ahụ, nke na-eme ka njikwa nke ogige ahụ na-esikwu ike. A telescopic kwesịrị ekwesị trimmer kwesịkwara inwe nsogbu na alaka osisi. Otú ọ dị, na mgbakwunye na arụmọrụ ahụ, mgbanwe dị na nhazi bụ ihe dị mkpa. Ezi ịkwa osisi telescopic dị mma ọ bụghị naanị ịgbatị nke ọma, kamakwa ọ ga-abụrịrị na ọ ga-adịwanye mfe n'akụkụ. Ọ bụ obere enyemaka ma ọ bụrụ na telescope dị ogologo oge, ma ogige trimmer apụghị iru ọdụ ọdụ ya n'ọnụ. Ya mere, ọkpụkpụ aka ahụ kwesịrị inwe akụkụ ụfọdụ na mkpanaka mkpara. Nke a bụ naanị ụzọ ị ga-esi egbutu ohia na shrub na-enweghị ịrị elu. A na - arụkwa ezigbo nsonaazụ ya na mma nkiri. Nke a na-eme ka o kwe omume ịkpụ ọbụna ogige ndị kachasị oke.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkwanye mkpuchi kachasị mma, ị kwesịrị ịṅa ntị na ọganihu na nkwekọrịta dị iche iche na-ebu n'ihu ịzụta. Onye na-eji osisi batrị nwere oghere nwere uche ma ọ bụrụ na ọrụ ahụ dị ọkụ ma arụmọrụ dị ala. Ebu ibu, mkpọtụ mkpọtụ, ihe eji eme ihe - ihe ndị a na-egbu egbu na-eme obere nsogbu mana ha agaghị enwe ego. Ogwe eletriki eletrik dị mma maka oghere telescopic nakwa maka ebe siri ike nke oke obo. Otú ọ dị, ike USB na-egbochi ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ nnukwu mpaghara na ị ga-ahụkwa alaka alaka, ị gaghị agafe otu moto ma ọ bụ mmanụ ụgbọ elu trimmer. Ngwa ndị a bụ ihe siri ike, ọ bụ naanị ndị ọkachamara ga-eji ya, ọ dịkwa oke ọnụ maka ịchụ na ntụrụndụ.
Ozi ndị ọzọ si na nke a: Mkpụrụ akwụkwọ petrol , mower na Verticutter.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ihe ịzụ ahịa ahịa ole na ole:
enyeBestseller no 1
Bosch Hedge trimmer AHS 45-16 (mkpuchi agụba, katuunu (420 W, 450 mm ịkpụ, ogologo 16 mm agụba))
Akwa Hedge AHS 45-16 - maka ogige dị mma na-akụkọta
Kwesịrị ekwesị maka ọnwụ nke obere ma ọ bụ obere na-ajụ si hedges ruo 1m
N'ihi ibu dị arọ nke 2,6 n'arọ ga-arụkwa ọrụ ogologo oge
Ihe na-enye obi ụtọ na-arụ ọrụ ma na-ejizi mma ekele ekele obere akụkụ
Akụkụ nke nnyefe: AHS 45-16, mkpuchi mma, katọn (3165140582612)
Black + Decker ogwe ọkụ eletrik trimmer GT5560 na enyemaka eriri USB na njikọ kpọmkwem nke eriri mgbatị maka nkasike kachasị mma - 25mm ịcha oke - 550W - 60cm hụrụ ogologo agụ - 2,9kg indicator
The oke trimmer igwe bụ ezigbo maka ịcha alaka ruo 25mm oké ma mmasị na arụmọrụ na nnọọ elu nkasi obi
A na-eji ogwe ndị na-ekpuchi oghere na geometry ghere oghe na akwa nke a na-ekpocha - maka mmezi nke ọma na ogologo ndụ nke mma
Ijeghari USB na-edozi: N'ihi eriri eriri USB, eriri USB nwere ike ịduzi n'ụzọ a na-achịkwa / Ntanye njikọ nke eriri mgbatị ga-eme ka ọ bụrụ na ọhụụ USB adịghị adị
Nkasi obi kachasị: Mkpọmnta ọkụ na nkwekọrịta dị mma n'etiti mma na aka na - emezi ihe kachasị mma - maka mfe njikwa
Udiri nnyefe: 1x elekere elekere elektrọnik okpu igwe, yana eriri eriri enyemaka / 550W / 2-njikwa megide ịgbanwụrụ na mberede / ịgbada ogologo: 60cm
Ọkachamara eletriki okpu igwe elekere elekere elekere elekere elekere anya 750 watts - ya na mma ejiri mma belata laser laser na ezigbo mkpakọ mkpokọ - Maka mma ịkpụzi oke ya na oke ohia.
INNOVATIVE NA Ọhụrụ - A na-eji mma ndị ahụ eme ihe site na usoro mkpo laser na-agbanwe agbanwe. Nke a na-eme ka ịkpụ ahụ dị mma ma dị nro n’ubi gị.
EGO zuru oke - a ga-egbutu ogige gị na osisi gị nke ọma. Ubi gị ga-enwe obi ụtọ site na ọhụụ eji mma arụ ọrụ Laser Cut. Na mgbakwunye, shingge trimmer dina nke ọma n'aka.
AKWARTKWỌ AKWARTKWỌ --B --R - TheBARA - Mkpochapu ogologo nke shingge trimmer na nnukwu 610 mm. A dọọrọ uche gaa na mma agha dị ogologo. Na mgbakwunye, a na-eji skis ahụ arụ ọrụ na eriri ọkụ gburugburu ebe obibi.
AKWKWỌ - Igwe ọkụ eletriki nwere ihe nchekwa ọkụ na breek mma. Nke a na - eme ka nchekwa ngwa eletrik na - echekwa nke ọma.
AKALR BR AK REKỌ AKALKỌ B --R - - Pike (ngwá ọrụ ubi, akụrụngwa, trimmers, hedim trimmers, trimmer-light, Mgbakwunye akwụkwọ ntuziaka, ogologo ọkụ) guzoro maka ịdị mma ọnụahịa dị oke mma.
enyeBestseller no 4
AHA 50-20 LI (1 recharge batrị, sistemu voltaji 18, ogologo 50cm, ogologo oghere 20mm, na igbe) Ngosipụta
Eriri okirikiri ahụ na - enweghị eriri AHS 50-20 LI - mobile na ngwa ngwa mbelata nke ọma
Nrụrụ hụrụ: ezé pụrụ iche dị n'ihu mma ahụ na-egbutu alaka ruo 25 mm na dayameta
Mgbanye n'akụkụ mgbidi na ala ga-ekwe omume n'ihi onye nche mma
Oke nnyefe: AHS 50-20 LI, 1 pack packaging PBA 18V 2.5Ah WB, chaja AL 1830 CV, katuunu
Ike maka 18 Volt niile: Batrị enyere ya dakọtara yana ngwaọrụ niile nke Greench Home & Garden 18 Volt Sistem na ebe nchekwa ikuku Bosch Unlimited.
enyeBestseller no 5
GNS 94001 GHS 510 P ogwe ọkụ eletrik trimmer (500W, 460mm oge nkwụsịtụ, nkwụsịtụ 16mm, akara ọsọ ọsọ, nchebe mma agha)
Nnukwu 500 W engine dị elu maka ike dị elu na obere ike
Lengthkpụ ogologo nke 460 mm na oghere mma nke 16 mm - maka ịkpụcha mgbidi gị zuru oke
Ngbanwe nchekwa nke aka-abụọ na ngwa ngwa imechi na-akwado nchekwa kacha arụ ọrụ
ndị nche mma agha gụnyere
Ihe mgbochi elektriki elektriki elektrik EasyCut 420/45: elektrọnị ogige elektrik nwere 420 W moto ike, 45 cm mma ogologo, oghere 18 mm, oghere ergonomic na nchedo mmetụta (9830-20)
Maka ntakịrị obere hedges: Ntu ọnụ na-enye obi ụtọ maka ịdị arọ nke naanị 2.6 n'arọ
Njikwa obi na-adọrọ mmasị: Ogwe ergonomic na bọtịnụ ntọhapụ ukwu maka ọnọdụ ọ bụla ọnwụ
Na-eme ka ngwaọrụ gị dịkwuo ogologo: Kwụsị nchebe na-echebe eriri afọ mgbe ị na-egbu ha nso n'ala
Ike siri ike: Profischliff na ezé pụrụ iche maka ịkụcha ọbụna alaka ndị siri ike
Akụkụ nke nnyefe gụnyere: 1x GARDENA ogige ọkụ trimmer EasyCut 420 / 45
enyeBestseller no 7
Einhell ogwe ọkụ eletrik GE-EH 7067 (700 W, 670 mm ọnwụ ogologo, 30 mm pitch, onye na-ewe ihe ubi, eriri mkpu enyemaka)
700 Watt siri ike onye inyeaka n'ime ogige nwere mkpịsị nke 670 millimeters na 3.000 bee kwa nkeji.
A na-eme ka ọkpụkpụ laser-cut and diamond-ground steel. Ngwongwo ígwè na mkpuchi egwu. Ogwe ergonomic ọzọ na ogwe aka azụ na-eme ka nkasi obi kachasị mma.
Ngwa ngwa gbanwere: nkwụsị mgbapụ n'okpuru otu nchedo aka na nnukwu aka.
Cable na-enye nsogbu maka enyemaka siri ike.
Tinyere mkpokọta ihe eji eme ihe. Ejiri akwusi siri ike maka nchekwa na ibufe yana mkpuchi blade aluminum maka nchedo mma.
enyeBestseller no 8
Einhell elektrọnik mgbanaka GH-EH 4245 (420W, 450mm cut planning, 12mm cut cut, gita igwe, mkpuchi bekee, onye na-eche nche, onye na-eche mma agha) ngosi
Ike 420 na ike ergonomic maka ọrụ na-enweghị ike ọgwụgwụ
Nchekwa kachasị maka nkwụnye ihe nkedo, nchekwa aka na aluminom mma
Ihe nkedo uzo oyi na-ekpochapu
Ogologo ndụ na-eji akara laser-cut
Iwu ngwa ngwa na nchebe nke mma agha site na igbe dị ike plastik
Ihe nlekọta osisi Bosch hedge trimmer AHS 55-26, mkpuchi agụba, katọn (600 W, 550 mm agụba ogologo, 26 mm agụba oghere, 3,6 n'arọ) Ngosipụta
Ogige omeiwu AHS 55-26 si na Bosch - maka mgbidi gị nke ọma
Ngalaba alaka na-enweghị mmeri ruo 32 mm dayameta ekele maka ọrụ ịchọta
Karịsịa maka oke elu ruo 2 m
Nchebe na-ekpuchi maka mgbidi tinyere mgbidi na ala
Akụkụ nke nnyefe: AHS 55-26, mkpuchi mma, katọn (3165140643542)
enyeBestseller no 10
Einhell eletrik ọkụ trimmer GC-EH 5747 (570 W, 2 aka nchekwa mgbanwe aka na njedebe, na-atụgharị na-atụgharị, mma abụọ mmachi mma nchekwa) Ngosipụta
A na-eji ígwè eletrik arụ ọrụ maka ndụ ogologo oge. Na-eguzogide, mma nchekwa nchekwa abụọ maka ezigbo aka.
Nchedo site na ngbanwe nchekwa abụọ.
Aka nchekwa ukwu na ergonomic ọzọ aka.
Cable na-enye nsogbu iji chebe eriri.
Gụnye ọgba aghara siri ike.
Rating: 3.0/ 5. Site na 2 votes.
shrub ịkwa osisi
Isiokwu bu nke aEgwuregwu eletriki
Isiokwu ọzọprotein ntụ ntụ
ọdọ mmiri agụụ